DHEGEYSO-Madaxweyne Gaas oo hambalyo u diray shacabka iyo dowladda Turkiga. – Radio Daljir
Luulyo 16, 2016 2:45 b 0
Galkacyo July, 16 2016 Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 16-July-2016 hambalyo u diray Madaxweynaha dawladda aynu walaalaha nahay ee Turkiga Reccep Tayyib Erdogan oo dawladdiisu ay ka badbaadey isku day Afgembi oo ciidamada Millateriga dalkaasi ay ku doonayeen in ay ku manja xaabiyaan dawladdaasi.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay in muddadii uu xilka hayey xisbul-xaakimka talada dalkaasi haya ee uu hoggaamiyo Madaxweyne Reccep Tayyib Erdogan uu waddankaasi gaarsiiyey horumar aad u ballaadhan, dhammaan dhinacyada kaabayaasha dhaqaalaha, siyaasadda iyo xiriirada uu dalkaasi la leeyahay waddamada caalama.
“waxaan ugu hambalyaynayaa Madaxweyne Erdogan horumarka, Nabadda iyo Barwaaqada uu gaadhsiiyey dalkiisa, waan ogahay Turkiga maalintii xisbigaani qabsaday meeshii uu jogey iyo maanta halka uu marayo farqiga u dhexeeya.
Shacab weynaha Turkigana waxaan ku bogaadinayaa siday u garab istaageen dawladdooda, ulana dagaallameen kooxihii qaska wadey, waxayna arrintaani tusaale u tahay cid walba oo isku dayda in ay ka hor tagto rabitaanka shacabiga”ayuu yiri Madaxweyne Dr. Cabdiweli Maxamed Cali.
Madaxweyne Dr. Cabdiweli Maxamed Cali waxa uu xusay dawladda Turkigu in ay tahay dawladda keliya ee Soomaaliya usoo gurmatey xilligii ugu adkaa ee shacabka Soomaaliyeed ay isugu biireen colaadaha daba dheeraaday iyo abaarihii lagu cayroobey.
“Turkigu waa dawlad walaaleheen ah, waad la socotaan oo waa dawladda keliya ee inoo soo gurmatey markii dhibaatada iyo majaacadu ay dalkeena ku dhacday, ilaa iyo haddana waxay ka wadaan dalkeena horumar.
Anigoo ku hadlay magaca dawladda iyo shacabka Puntland waan u hambalyaynayaa dawladda iyo shacabka Turkiga, waxaana rajeynayaa maanta dawladnimadoodii way badbaadsadeene in ay sii bullaalaan horumarkoodana sii wataan” ayuu yiri Madaxweyne Dr. Cabdiweli Maxamed Cali.
Shacabka iyo dowladda Turkiga oo ka guulaaystay ciidamadii afgambiga sameeyey.